कप्तान पारस खडकाको पेटको सल्यक्रिया, भारतमा हुने अभ्यासमा सहभागि नहुने - Nepal Cricket
काठमाडौं – नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का सफल उपचारपछि आज अपरान्ह अस्पतालबाट घर फर्किनु भएको छ ।
अचानक पेट दुखेपछि गत शुक्रबार काठमाडौंको धापासीमा रहेको ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका पारस ३ दिनपछि आज घर फर्किनु भएको हो ।
अश्वस्थताका कारण पारस खड्का केन्या विरुद्धको खेल अघि भारतमा हुने एक साताको क्याम्पमा नजाने भएका छन । तर टिम भारतबाट फर्किएपछि पारसले क्याम्प सहभागिता जनाउने भएका छन ।
पारसलाई रिकरेन्ट एपेन्डिसाइटिस बीथ इन्टेसटाइनल अब्स्ट्रक्सन भएकोले उहाँको क्यामेरा प्रबिधिबाट एड्हेसियोलाइसिस तथा कि होल सर्जरी (गुजुल्टीएका आन्दाहरु मिलाउने) तथा इमरजेन्सी ल्यापारोस्कोपिक एपेन्डिक्टोमी गरीएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँलाई एकहप्ता पछि फलोअपका लागि बोलाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उहाँको उपचारमा डा. प्रबिण बिक्रम थापा, डा. धिरेश महर्जन, डा. रोशन घिमिरे र डा. सन्तोष श्रेष्ठको टिम संलग्न रहेको थियो । एनेस्थेसियामा डा. मुरारीराज उप्रेति र डा. अर्चन अधिकारीको टिमले साथ दिएको थियो ।
पेटमा सानो प्वाल मात्र पारेर सर्जरी गरीएकाले खड्का चाडै खेल मैदानमा फर्कने उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको दाबी छ । गत शुक्रबार दिउँसो सहनै नसक्ने गरेर पेट दुखेपछि खड्कालाई परिवारका सदस्यले अस्पताल पुर्याएका थिए ।